Horukac mise Gadaal u gurasho: labo sano kaddib doorashada Madaxweyne Farmaajo.(Qormo) – Radio Daljir
Horukac mise Gadaal u gurasho: labo sano kaddib doorashada Madaxweyne Farmaajo.(Qormo)
Febraayo 8, 2019 11:51 b 0
Horukac mise Gadaal u gurasho: labo sano kaddib doorashada Madaxweyne Farmaajo
Laba Gu’ ayaa u gaba-gabowday Dawladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ee talada dalka ku guulaysatay 8-Febraayo 2017, qammaamiir tirobeel ah ayaa ku rajo weynaa guul in uu soo hoyo geeddigan horta leh ee berigaas la doortay, goor musuqa iyo amni xumadu ahaayeen labada arrin ee Musharrax walba ajandihiisa ugu horraysiinayay.
Khudbaddii Ololihiisii ee uu Baarlamaanka ka horjeediyay waxa uu yiri: “Siyaasaddu Khiyano maaha, ballan ka bax maaha, been maaha” Hadalkan Madaxweynaha sidee ayuu maanta shacabka ugu jawaabayaa 2 sanno kadib ee uu ballanqaadyadoodii amni fulin, safarrada badan ee uu ku eedeeyay dawladihii ka horeeyay joojin, Baarlamaanka fara galiyay isaga oo dhaqankaas horay u dhaleeceeyay.
Maxay ahayd in la qabto:
Maalin kadib caleemasaarkiisa 23 Febraayo 2017, ayuu Madaxweyne farmaajo Ra’iisul Wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre, Mudane Khayre Siyaasadda horay uguma uusan jirin, musuq ayaana horay loogu eedeeyay Shirkadda Som Oil oo uu ka mid ahaa
Qodobo badan oo ay ugu horreeyaan Dastuurka oo la qabyo tiro, Doorashada 2020 oo qof iyo cod noqota, dib u heshiisiin, dhisidda ciidanka iyo la dagaalanka musuqa ayaa horyaallay RW Khayre iyo MD Farmaajo, haddaba aan dib u milicsanno geeddigoodii dawladnimo ee laba jirsaday waxa u hirgalay.
Al-Shabaab iyo Madaxweyne Farmaajo:
Tiro toban jeer ku dhaw ayuu Madaxweynuhu tuute gashaday, warbaahinta hadallo hanjabaad ah uga diray Al Shabaab, shacabka na uga codsaday wada shaqayn, dhammaan dagalaallada uu iclaamiyay Madaxweynuhu waxay noqdeen “Qawda maqashii, waxna ha u qaban”.
“Shabaab baa weerara meeshay rabto, dawladdu tacsi iyo canbaarayn uun ayay haysaa’” waa hadal isna xasuus dadka ku reebay oo uu Madaxweyne Farmaajo ka hor jeediyay Baarlamaanka, isaga oo markaa eedeynayay Dawladdii Xasan Sheekh.
Bishii Oktoobar 2017, 31-keeda ayuu Mudane Farmaajo sheegay in ay ka adkaan la’yihiin Al-Shabaab, oo 10 sanno dagaal lagula jiro. Dhawr jeer oo kale cafis ayuu u fidiyay xubnaha Al-Shabaab in ay isa soo dhiibaanna waa uu waydiistay.
Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay:
UN ka oo taageero dhan walba ah siinayay Soomaaliya tan iyo burburkii ayay mar kali ah is rogtay xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya, ka dib markii maalinka 1-aad ee sannadkan 2019 Wasaaradda Arrimada Dibadda Soomaaliya shaacisay in Ergayga UN-ka ee Soomaaliya aan laga rabin dalkan ayna tahay in uu isaga tago.
Eedeymaha loo jeediyay Ergaygii UN-Ka ee Soomaaliyaw axaa u waynaa in uu soo farageliyay madax bannaanida dalka, sidaas na waxaa warbaahinta u sheegay Wasiir Axmed Cawad.
Maxaa noo diiday inan Denmark la tartanno?!
Madaxweynaha oo Baarlamaanka hortaagan ayaa yiri” Denmarka aya kow ka ah liiska dalalka musuqa uunan ka jirin, annaga amxaa noo diidaya inan tartan la galno. Transparency International sannadwalba kaalinta u hooseysa ee musuqa ayan kusoo baxnaa”.
Labadii sanno ee dowladda xilka heysay Musuqa ayay ka dhigteen cadaw ay la dirirayaan xilli Wasaaradda Gargaarka agaasimayaasheedii maxkamad loo soo taagay, saraakiil kalena lagu xiraye eedeyn musuq, xasuusnaw warbixinta 2018 ee Transparency international waxay sheegtay in Soomaaliya musuqa kaalinta 1-aad uga jurto oo ay booskaas difaacanayso.
Ballamihii la dagaalanka musuqa ee Madaxweynaha ma fulin, se waxaa u haray muddo ku filan in uu reebo dhaxal ifaya oo Soomaaliya ka dhiga dawlad daah furnaan u tahay asaas.
Baarlamaanka iyo Madaxtooyada: Dhado roob noqon wayday!
Madaxweyne Farmaajo waxa uu horay u ballanqaaday in uu dhawrayo sarraynta sharciga, faragelinna uusan ku samayn doonin Golaha Shacabka oo waajibkiisu yahay korjoogtaynta iyo meelmarinta sharciyada dalka.
Khilaaf siyaasadeed ahaa kii u xumaa ee ay dawladdan wajahdo waxa uu ahaa midkii dhexmaray Hay’adda fulinta iyo Baarlamaanka Federaalka ah ka dib markii Xukuumadda Khayre iyo madaxtooyadu u arkeen in Mooshin qalqal gelinaya uu kaga soo wajahanyahay dhanka BFS.
Gudoomiyahii hore ee Baarlamaanka Jawaari ayaa ugu danbayn ku baxay xilli isbuucyo baarlamaanku shaqo gab ahaa, amniguna qatar galay, Xarunti Golaha shacabka lala wareegay, oo Xildhibaannadii u kala jabeen Khayre iyo Jawaari.
Arrinta la xusuusto ee xusidda mudan waxay ahayd in Ciidamo beeleed hubaysan la soo dhoobay Magaalada laguna sigtay dagaal sokeeye, maadaama Xukuumaddu awood adeegsatay.
Xiisaddii Qalbi dhagax: Soomaalinimo muran gashay!
Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ONLF ka tirsanaa ayay Xukuumaddu Gaalkacyo kasoo qabatay 23 Agoosto 2017, kuna wareejisay Ciidanka Itoobiya, Baarlamaanka Federaalka ayaana guddi uu u saaray ka dib falkaas ku tilmaamay sharci darro.
War saxaafadeed ay Xukuumaddu soo saartay oo uu aqriyay Wasiirkii Warfaafinta ee xilligaas Eng Yarisow ayaa Jabhadda xoraynta Ogaden ee ONLF loogu daray liiska waxa loogu yeero Argagixisada.
Arrinta Qalbidhagax ayaa dawladda ku noqotay laf dhuun gashay ka dib markii Dawladda Itoobiya xorriyaddiisa soo celisay muddo lagu hayay xarunta sirdoonka Itoobiya ee Addis kadib, Madaxweyne Farmaajo oo arrintan muddo kaa amusnaa ayaa ugu danbayn Baarlamaanka ku raacay go’aankoodii.
Weerarkii Guriga C/raxmaan C/shakuur
December 2017 Ciidamo ka tirsan NISA ayaa xilli habeen ah weeraray guriga uu Muqdisho ka deganaa Siyaasiga mucaaradka ee hoggaamiya Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur, weerarkaas lagu soo xiray Mr Warsame waxaa lagu dilay 5 ka mid ah Ilaaladiisa, waxaa uu ahaa weerarkii u horeeyay ee dowladda u adeegsato siyaasi rayid ah, waxaana ka mid noqotay dhacdooyinka waa weynaa ee sanadkii 2017 ka dhacay Soomaaliya, taasoo loo arkayay in dowladda ku xadgudubtay dimoqraadiyadda iyo xoriyatowl qowlka siyaasi ka ra’yi duwan inay weerarto.
C/raxmaan C/shakuur ayaa xilligaas sheegay in qorshaha lagu weeraray hoygiisa uu ahaa mid shirqool lagu khaarijin rabay oo laga soo maleegay Madaxtooyada Villa Somalia.
Jahwareerkii Khaliijka: Dhexdhexaadnimada Soomaaliya ee danaha carabta
Ka gadaal go’doomintii Qatar ee ay isugu tageen dalalka carabta, waxay soomaaliya dhibbane u noqotay Sacuudiga iyo imaaraadka oo Dawladda cadaadis ku saaray in ay taageerto ama ay cadaw ka dhigtaan, tani waxa ay keentay in Soomaaliya go’aan dhexdhexaadnimo ah ku talo goysatay, kaas oo dhaliyay in imaaraadku xiriir la sameeyo maamul goboleedyada, uuna iska indha tiro xeerarka Diblumaasiyadda.
Iskaashiga Seddex Geesoodka ee Geeska Afrika
Mid ka mid ah Guul ay dawladdu danwaynaha la wadaagtay waa heshiiska seddex geesoodka ee Soomaaliya, Eretria iyo Itoobiya, siyaabo kala geddisan ayaa looga falceliyay waxtarka uu Soomaaliya u leeyahay xilli isbadal uu ka jiro mandiqadda.
Falanqeeyayaasha arrimaha geeska Afrika waxa ay isbarbardhig ku sameeyeen dhibaatada gudaha ee haysata Afawerki oo ah hogaamiye kali talis ah oo ciidamiisa qasabka lagu askareeyay iyo Abiy Ahmed oo ay qasab ku tahay siyaasad is furfuritaan iyo in uu soo dhawaysto jabhadaha ONLF, OLF iyo Ginbot 7 oo fadhigoodu ahaa Eretria, isku darka dhibta ay labadaas masuul wadaagaan waxaa ka imanaysa in aysan ku habboonayn heshiis hirgal noqda in uu dhaco.
Soomaaliya, si kale haddii loo dhigo waxaa suuragal ah in ay suuq ka hesho oo ay shucuubta Itoobiya ka dhigto macmiil laga helo dhaqaale uu qaranku u arko ildhaqaale, ayna adeegsadaan xeebaha dalka iyada oo sharcigeeda la marayo.
Dastuurka: mashruuc aan dhammaad lahayd!
Tan iyo 2012 ayuu socdaa mashruuca dib u eegista oo aan hal tallaabo horay u qaadin, sababaha uu u guulaysan la’yahay way badanyihiin, waxaase iswaydiin mug leh tahay maxay dawladda Nabad iyo Nolol miisaaniyad u gaar ah ugu dajin waysay Dib u eegista dastuurka?!
Guddiyo aan loo baahnayn oo tiro beel ah ayaa jira oo hakad gelinaya habsami u socodka shaqada dhammaystirka Dastuurka KMG ah ee la ansixiyay 2012, sida Guddiga dib u eegista ee madaxa bannaan, guddiga la socodka dastuurka ee Golaha shacabka, guddiga aqalka sare iyo Guddiyada Dawlad goboleedyada, waa guddi kastaa iyo budo gooni u tuman.
Hay’adaha Garsoorka iyo Xeeladaysiga Madaxtooyada:
May 2018 waxaa la eryay Gudoomiyahii maxkamadda sare, laguna badalay qof aan xeeldheeri iyo aqoon u lahayn garsoorka, waxaana la kala diray dhammaan xubnaha Maxkamadda sare.
Arrintan dadka wax qora iyo sharciyaqaanno ayaa ku tilmaamay la wareegid dadban, iyo in laga hortago isla xisaabtan lagu sameeyo laamaha fulinta maadaama qodobka 90 ee Dastuurka dalku dhigayo in Madaxweynuhu la tashado Gudiga adeegga garsoorka, guddigani na ma jiro maadaama xubnaha lagu dhisi lahaa aan lahayn sida Gudoomiyaha Maxkamadda Dastuurka iyo Gudoomiyaha Guddiga xaquuqul insaanka;
Waxaa kale oo xusid mudan in aysan jirin dadaalladii lagu dhisi lahaa Maxkamadda dastuuriga ah ee xalka u heli lahayd khilaafaadka Haya’adaha dawladda iyo qaadista dacwadaha ka dhanka ah Madaxtooyada.
Dawlad goboleedyada waa Baalashii ay Dawladda ku buubi lahayd!
Oktoobar 2017 Kismaayo waxaa isugu yimid shanta Madaxweyne ee Maamul goboleedyada Dalka, waxay na ku dhawaaqeen Madal iskaashi, ayaga oo xiriirka u jaray Dawladda Federaalka oo ay ku eedeeyeen in aysan u diyaarsanayn qabashada Doorasho 1 qof iyo 1 cod sannadka 2020 iyo in deeqaha caalamka laga qadiyay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa caleema saarkiisi ka yiri: “Dawald goboleedyadu , waa baalashii ay ku buubi lahayd Dawladda Federaalka, dawladda federaalkuna waa indhahii ay wax ku arki lahaayeen” Madaxweynuhu wuxu ballanqaaday in iskaashi iyo wax wada qabsi dhex mari doono labada dhinac, mase dhicin.
December 2018, Baydhaba waxaa lagu doortay siyaasi Laftagareen oo ay dawladda federaalka ahi u xaartay dhabbihii guushiisa, kadib xariggii Roobow iyo is casilaaddii Madaxweynahii hore ee KG Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Fursad uu Farmaajo dayacay!
Qaraxii Soobe”KM5″ ee 14 Oktoobar 2017 ee boqollaal shacab ahi ku halaagsameen, kasukow dhibta iyo musiibada, si siman ayay shacabku uga faleceliyeen dal iyo dibad, tani waxay fursad u ahayd in Dawladdu dareenka midaysan ee shacabka uga faa’idaysato dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab, oo ay xooggaas taageeray u aragto fursad mar la arag ah.
Ma dhicin oo waxaa laga badin waayay sawirro lala galo dhallinyaradii Gurmad Qaran iyo shacabkii ka qayb qaatay gurmadka, iyo in baraha bulshada uun ay dhaafi wayso ka falcelinta dawladda ee dhacdadaas.
Dulmarid: Guulaha Farmaajo iyo Khayre.
Dawladda in ay amniga sidii loogu hanwaynaa wax uga qaban, Garsoorka uu liito, Musuqii jiro weli, doorasho hal qof ah iyo hal cod ahna aysan muuqan, iyo in Dastuurka aan la dhmmaystirin ,haddana Guulo ay dawladdu gaartay ayaa jira:
1. Madaxtooyada iyo RW Khayre oo dhaqan ugub ah jideeyay:
Waxaa dhaqan cusub noqday in ay wada shaqayn iyo isfahan muddo inta la eg yeeshaan Madaxweyne iyo Ra’iisulwasaare tan iyo burburkii, oo looga bartay dawladihii soo maray in isqabqabsi uu kubaxo wasiirka 1-aad dhaco, Dawladihii Sh Sharif iyo Xasan Sheekh dalka 6 Ra’iisul Wasaare ayaa soo maray.
2. Mushaaraadka Shaqaalaha rayidka iyo Ciidamada:
Sidoo kale waxa ay ku guulaysteen bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo ciidanka qalabka sida, oo horay cabasho wayn uga jirtay.
3. 1 Tillaabo hooray loo qaaday:
9-ka August 2018 waxaa shaqada laga joojiyay Wasiir ku xigeenkii Arr Dibadda Mahad Mukhtaar kadib codsi ka yimid Xeer ilaaliyaha qaranka iyo Hantidhawrka qaranka oo ku aaddan tuhun lunsasho hanti qaran, isla sanadkaas Oktoobar na eedeymo lacag dhaqid la xiriira si su’aalo looga waydiiyo waxaa shaqada laga joojiyay Wasiir kuixgeenka Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha Somaliya xildhibaan Maxamed Khaliif Diiriye .
4. Maxaabiista : Muwaadiniin ku kala xirnaa dalal caalamka ah, sida Itoobiya, Libya, Tanzania, India iyo Sycheles ayay dawladdu dadaal u gashay si gaar ah wasaaradda Arr dibadda, laguna guulaystay.
5. Qorshaha dayn cafinta: Lacag lagu qiyaasay 4.68 Bilyan ayaa la sheegay in dalkeenna lagu leeyaahy, African Development Bank iyo waax loo xilsaaray ayaa xogtan soo ururiyay oo Wasaaradda la wadaagay, waxana kadib loo gudagaay wadda loogu gogol xaarayo in laga cafiyo gabi ahaanba daymaha xooggan ee dalkan faqiirka ah lagu yeeshay burburkii iyo ka hor ba.
6. GAROONKA ADAN CADDE: Dowladdu waxay ku guulaysatay markii ugu horaysay tan iyo bur burkii in Garoonka Adan Cadde uu shaqeeyo xili Habeen ah.
7. Socdaalka Nabadda: Maamullada Puntland iyo Galmudug ayuu Madaxweyne Farmaajo 17 maalmood safar qaatay ku maray, gaalkacyo oo ahayd magaalo isdhexgalku adkaa na isku furantay oo ay ciidamda isku dhafka ahi ka hawl bilaabeen.
W/Q:- Khaalid Cilmi Nuur-Jees
Siyaasadda & Dhaqaalaha 481 Wararka 21332
Wasiir Siciid Maxamed Raage: “Ciidamada PSF iyo kuwa PMPF nagama amar qaataan” (dhegayso)